Beauty – OOTDMYANMAR
JAW DROPPING K-POP-INSPIRED EYESHADOW LOOKS BY A TALENTED FAN
No Comments on JAW DROPPING K-POP-INSPIRED EYESHADOW LOOKS BY A TALENTED FAN
K-Pop အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးရဲ့ အံ့ဩမှင်သက်စရာကောင်းတဲ့ K-Pop-Inspired Eyeshadow များ
Translating your addiction for KPOP thru makeup is another way to elevate your love for them. Meet Eli Zárate,a23-year-old K-pop fan from Spain who loves makeup.
မိပ်ကပ်အပြင်အဆင်တွေကနေတစ်ဆင့် KPOP ကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်တဲ့အကြောင်း ပြသတာက ကိုယ့်အချစ်ကိုဖော်ပြဖို့ တစ်မူထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ K PoP ပရိတ်သတ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ၊ စပိန်လူမျိုး Eli Zárate ဟာဆိုရင် မိပ်ကပ်ပြင်ခြင်းကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်သူပါ။
We would just let her works do the talking:
A post shared by eli (@elizg97)
For more of her creative work, you can check out her Instagram account.
နောက်ထပ်ဖန်တီးမှုတွေကို သူမရဲ့ Instagram account မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Tags ARMY, Beauty, bts, FAN, KPOP
ANIMAL NAILS FOR YOUR NEXT QUARANTINE PROJECT
No Comments on ANIMAL NAILS FOR YOUR NEXT QUARANTINE PROJECT
Quarantine မှာလုပ်စရာ လက်သည်းအလှပုံဖော်ခြင်း
If you’re looking to developafun new skill at home, maybe this is the sign that nail art is the one to try.
အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ အသစ်အဆန်းတွေလုပ်ရင်း ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို မြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လက်သည်းအလှပုံဖော်တဲ့နည်းလမ်းလေးကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
Tags Beauty, Fashion, ootdmyanmar
RAINBOW BANGS TO MAKE IT MAJOR
No Comments on RAINBOW BANGS TO MAKE IT MAJOR
It’s been almost months since #stayathome. And if you have done almost everything with your hair, from having bangs, trimming it, or making it short we’re giving youanew option: dying your bangs rainbow.
#stayathome ရတာ လနဲ့ချီလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင်ကိုလည်း အဖျားတိတာတွေ၊ အတိုညှပ်တာတွေ၊ ရှေ့ဆံမြိတ်ညှပ်တာတွေ တော်တော်များများ လုပ်ပြီးလောက်ကြပြီထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ootd က အိုင်ဒီယာ အသစ်လေးပေးချင်ပါတယ်။ ရှေ့ဆံမြိတ်လေးကို သက်တံ့ရောင်လေး ဆိုးကြည့်ပါ။
Anyhow, check out some fun takes on this trend.
ဒီ trend လေးမှာပါဝင်ထားသူတွေရဲ့ပုံတွေကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Xxxxx
Edited by @Yaminn Phyo Wai
Tags Beauty, ootdmyanmar, rainbowbangs
CUTE MANICURE IDEAS TO TRY OF YOU LOVE PASTELS
No Comments on CUTE MANICURE IDEAS TO TRY OF YOU LOVE PASTELS
အရောင်ဖျော့လေးတွေကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လက်သည်းအလှပုံဖော်နည်းလေးတွေ
Pastel colors look soothing on the eyes. They are alsoabetter choice if you plan on having your manicure ready this summer. Below, are some pastel nail polish ideas for inspiration:
အရောင်ဖျော့လေးတွေက ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မျက်စိအေးစေတဲ့အတွက် ဒီနွေရာသီမှာ လက်သည်းအလှပုံဖော်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ အရောင်ဖျော့လေးတွေက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် OOTD က အရောင်ဖျော့လေးတွေသုံးပြီး လက်သည်းအလှပုံဖော်ဖို့နည်းလမ်းလေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
4.. Half-moon nails
Tags Beauty, manicure, ootdmyanmar
14 MAKE-UP IDEAS FOR HEART’S DAY
No Comments on 14 MAKE-UP IDEAS FOR HEART’S DAY
Valentine’s Day isn’t all about havingaromantic relationship.
ချစ်သူများနေ့ဆိုတာ ချစ်သူတွေအတွက်သီးသန့်ကြည်နူးစရာနေ့ မဟုတ်ပါဘူး။
You can chill with your friends, watch movie alone, or celebrate it with your family.
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူလို့ရတယ်၊ တစ်ယောက်တည်း ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ် ဒါမှမဟုတ် မိသားစုနဲ့အတူကုန်ဆုံးမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်။
There is no reason for you to skip February 14 — in order to celebrate this perfectly, we have collated 14 celebrity inspired looks for V-Day.
ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှ February 14 ကိုကျော်သွားလို့မဖြစ်ဘူးနော်။
V-Day ကို ပြီးပြည့်စုံစွာဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ နာမည်ကြီး cele တွေနဲ့ဆင်တူစေမယ့် make-up look ၁၄ ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
MAKE-UP #1 CRIMSON LIPS
MAKE-UP #2 INNER EYE GLITTER HIGHLIGHT
MAKE-UP #3 CAT EYE
MAKE-UP #4 CARAMEL EYE SHADOW
MAKE-UP #5 PURPLE EYE SHADOW
Photo credits @phwayoosie
MAKE-UP #6 GLOSSY LIPS
MAKE-UP #7 BRONZE LOOK
MAKE-UP #8 PINK EYE SHADOWS
Photo credits @wutthmoneshweyi
MAKE-UP #9 HOT PINK
MAKE-UP #10 ROSY CHEEKS
MAKE-UP #11 CLASSIC RED LIPS
Photo credits @eaindrakyawzin
MAKE-UP #12 MINIMAL MAKE-UP LOOK
Photo Credits @naychioo_official @mrhaw
MAKE-UP #13 LASHES & LINER
MAKE-UP #14 PINK & GLITTERS
Tags Beauty, Fashion, myanmar, ootdmyanmar, tips
CUTE MANICURE FOR VALENTINES
No Comments on CUTE MANICURE FOR VALENTINES
Valentines Day is just around the corner. And whether you haveadate or not we can give you the reason to love Hearts Day.
Valentines Day လေး​နီးလာပြီနော်အချစ်တို့ရေ
အဲ့ဒီနေ့မှာ ချိန်းတွေ့စရာရှိရှိမရှိရှိ OOTD က ချစ်စရာကောင်းတဲ့နေ့လေးမှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့အကြောင်းပြချက်လေး ပေးချင်ပါတယ်။
The reason? The excuse to haveapretty manicure in time for this celebration.
ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်မျိုးလဲ။ လှပတဲ့လက်သည်းလေးတွေနဲ့ ချစ်သူများနေ့ကို ဆင်နွှဲလိုက်ကြရမယ်လေ။
Here are 10 cute ways to make your nails stand out.
သူများနဲ့မတူဘဲ စတိုင်ကျလှပနေမယ့် လက်သည်းပုံစံဆယ်မျိုးကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
Photo credits @aliciatnails
Photo credits @thehangedit
PINK +RED MANI
Photo credits @paintbucketn
MINI HEARTS + GLITTERS
Photo credits @imarninails
Photo credits @nailbyaly
Photo credits @oliveandjune
THIN PINK TIPS
Photo credits @akikonails
Photo credits @cassmarieb
PURPLE & MARBLE
MICRO MINI SQUARES
Photo credits @mpnails
Photo credits @cassiemarieb
Photo credits @vallenyc
Tags Beauty, nails, ootdmyanmar
BANGS TO TRY FOR YEAR 2020
No Comments on BANGS TO TRY FOR YEAR 2020
Saying hello to January withafresh hairstyle somehow tells the world you’re ready to rock 2020 withabang.
၂၀၂၀ ရဲ့ ဇန်နဝါရီလ ကို ဆံမြိတ်ဆံပင်ပုံစံလှလှလေးနဲ့ ခေတ်ရှေ့ပြေးရင်း ကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင်။
If you embody New Year, New Hair but still don’t know the perfect hair to rock. We suggest bangs. It enhances your facial bone structure meaning it makes your face look slimmer. Ready for your hair transformation? Check the hair inspos we curated for you:
နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်လူသစ် ဆံပင်စတိုင်အသစ်ပြောင်းချင်ပေမယ့် ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဆံပင်ပုံစံကို ရှာရခက်နေလား။ ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာသွင်ပြင်ကို သေးသွယ်သွားစေတယ်လို့ခံစားရမယ့် ရှေ့ဆံမြိတ်လေးထားဖို့ အကြံပေးချင်တယ်နော်။
ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင်စတိုင်ကိုပြောင်းလည်းဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ OOTD က အကြံပေးထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
Photo credits to Pinterest and Instagram.
Tags Beauty, ootdmyanmar
Join 112,094 other followers